ShweMinThar: မလေးရှားလေယာဉ် MH370 ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ
ပျောက်ဆုံးသွားသော မလေးရှားလေယာဉ်ရှာဖွေရေး၌ ပါဝင်သည့် RSS Steadfast မှ အရာရှိတစ်ဦး မတ် ၁၃ ရက်က ညွှန်ကြားမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ်
ကွာလာလမ်ပူ-ပေကျင်း ခရီးနှင်ချိန်ကနေ ခြောက်ရက်မြောက်နီးနီး ကြာလာချိန်မှာ မလေးရှားလေယာဉ် MH370 ရဲ့ အစအနတောင် မတွေ့ရသေးဘူး။ တရုတ်က တွေ့တယ်ဆိုတာကလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့ ။ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေ၊ မှားယွင်းနေတဲ့ ဆီကွက်၊ အစအနတွေ၊ အဖြေထက် မေးခွန်းတွေကသာ ပိုများပြီး ရှာဖွေမှုအပေါ် အာရုံစိုက်မှု ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာစေတယ် . . .
Written by ကိုနေ(မန်း)